पर्दा पछाडिको सत्य : बलिउडका यसरी खिचिन्छ चुम्बनको दृश्य
एजेन्सी । फिल्मले मानिसको जीवनको बारेमा थुप्रै कुरा देखाइरहेको हुन्छ । मानिसले जीवनयापनको क्रममा भोग्नुपरेका हरेक पलको चित्रण गरेर फिल्मको निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यसैले फिल्ममा जीवन, मृत्यु, प्रेम र यौन आदि जस्ता कुरालाई पनि जीवन्त पर्दामा उतार्नु फिल्मको कर्तव्य पनि हो ।
फल्ममा यस्ता दृश्यहरु कसरी पर्दामा उतारिन्छ त ? यो फिल्म हेर्ने हरेक दर्शकको उत्सुकताको विषय पनि हो ।
हरेक फिल्ममा प्रायः देखिने दृश्य हो, चुम्बनको दृश्य । हरेक फिल्ममा सामान्य चुम्बनका दृश्यहरु हेर्न सकिन्छ । तर के यस्ता दृश्य सबै अभिनेता र अभिनेत्रीले बास्तबमै क्यामराको अगाडि दिएका हुन् त ?
साच्चैँ नै फिल्ममा देखिने अधिकाशं चुम्बनका दृश्य अभिनेता र अभिनेत्रीले क्यामराको अगाडि नै दिएका हुन् । भने यदि कुनै अभिनेत्री वा अभिनेताले यस्तो दृश्य दिन इन्कार गरेको खण्डमा एक अर्कालाई नछोइकनै यस्तो दिनुपर्ने हुन्छ ।
केही समय अघिमात्रै फिल्ममा काजोल अग्रवाल र अभिनेता सूर्याले एक अर्कालाई नछोइकन नै दिएको चुम्बनको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ ।
उक्त दृश्यमा फिल्मका डाइरेक्टरले सूर्यालाई प्लाष्टिकको सीट दिएका थिए र उक्त सीटमा उनले चुम्बन गरे र पछि भिडियो एडिट गरेर प्लाष्टिक हटाइएको थियो ।